Fitsidihana: Biraon’ny Vavolombelon’i Jehovah any Angola | Tenin’ny Tanana Malagasy (TTM)
Tokony hanao famandrihana ve ianao alohan’ny hahatongavanao mitsidika? Eny. Iangavianay ny mpitsidika rehetra, na firy izy ireo na firy, mba hanao famandrihana alohan’ny hahatongavany, amin’izay dia tsy ho be loatra ny mpitsidika sady ho afa-po daholo. Ataovy herinandro mialoha, fara fahakeliny, ny famandrihanao. Tokony hatao aloha be ny famandrihana raha andro fety ilay andro tianareo hitsidihana.
Amin’ny firy ianao no tokony ho tonga? Tsara kokoa raha ao anatin’ny adiny iray alohan’ilay fitsidihana ianao no tonga fa tsy alohan’izay, mba tsy ho be loatra ny olona mifamezivezy.
Ahoana no fanaovana famandrihana? Tsindrio ilay hoe “Hamandrika Fitsidihana ho An’olona Latsaka ny 10”, raha tsy ampy 10 ny isanareo. Mandefasa kosa hafatra amin’ny InboxBTHLTourDesk.AO@jw.org raha te hamandrika ho an’olona 10 na 10 mahery ianao.
Hamandrika Fitsidihana ho An’olona Latsaka ny 10
Manara-maso ny fandikana boky ara-baiboly ho amin’ny fiteny folo, anisan’izany ny tenin’ny tanana angoley. Miandraikitra ny fanorenana Efitrano Fanjakana sy mandefa boky sy gazety any amin’ny fiangonana 2 269 mahery any Angola.
Hizara Hizara Birao sy Fitsidihana: Angola
Birao sy Fitsidihana: Angola